Uhlelo lokunakekelwa kwezikhalo zabantu | IOL Isolezwe
Uhlelo lokunakekelwa kwezikhalo zabantu
Isolezwe / 8 August 2012, 2:07pm /
BETHULE uhlelo okuhloswe ngalo ukusheshisa ukuhlinzekwa kwabantu ngezidingongqangi abakhele uMasipala weTheku iMeya uMnuz James Nxumalo neMenenja kamasipala uMnuz Sbu Sithole. ISITHOMBE: GCINA NDWALANE
ULAKA lwabantu oluvame ukuphelezelwa yimibhikisho enodlame selwenze uMasipala weTheku waqala uhlelo okuhloswe ngalo ukunakekela ngokushesha izikhalo zomphakathi namakhansela emphakathini futhi luqinisekise ukuthi abantu bahlinzekwa ngezidingongqangi ngokushesha.
Inhloso yokusungula lolu hlelo wukuba kuqiniswe ezokuxhumana kuphinde kucutshungulisiswe kahle futhi kuqashwe ukuthi izinqumo ezithathwe emhlanganweni weziphathimandla zikamasipala namakhansela ziyenziwa. Luzophinde lubhekisise izikhalo nezinkinga eziphakanyiswe ngamalungu omphakathi owakhele leli dolobha.
Lolu hlelo luzonciphisa isikhathi esithathwa umasipala uma uphendula izimfuno zabantu, kuqoshwe phansi zonke izikhalo zabantu ukuze zilungiswe ngokushesha izidingongqangi zomphakathi.
Ekhuluma emhlanganweni weziphathimandla eCity Hall izolo, uMnuz Sibusiso Sithole, iMenenja kaMasipala, uthe belungekho lolu hlelo lokhu obekwenza kube lukhuni satshe kubantu ukuthi bathole ukunakekelwa ngokushesha.
“Sizoba nohlaka oluzoqopha yonke imininingwane yomuntu nenkinga abhekene nayo esizoyithumela enhlokweni yomnyango olubhekiswe kuwo. Uzonikwa inombolo eqinisekisa isikhalo sakhe, ekugcineni athunyelwe impendulo ngokushesha yizinhlaka ezifanele,” usho kanje.
Ikhansela le-ANC kuWadi 57, uMnuz Thulani Khunju, uthe igcagcele esokeni ngalolu hlelo olusha ethi sekuzophela ukuhudulwa kwezinyawo kuma-call centre naseminyangweni kamasipala uma bebika ngenkinga kagesi namanzi okuphela njalo ewadini yakhe.
Uthe luzokwenza nokuthi iziphathimandla ziyilandele kuze kube sekugcineni inkinga esuke ibikiwe yaqoshwa phansi. Luzokwenza nokuthi umphakathi namakhansela athola ubulungiswa ekugcineni.
“Besiba nenkinga uma sibika ngezingqinamba zomphakathi emahhovisi kamasipala abasebenzi baseminyangweni ethile. bebevele basitshele ukuthi bazidlulisele kwabaphezulu izikhalo zethu kodwa sigcine singasizakalanga. Lolu hlelo luzokwenza abantu ukuthi basebenze ngokuzikhandla, bawukhuthalele umsebenzi wabo futhi kusheshiswe ukuhlinzekwa kwabantu ngezidingongqangi zomphakathi,” usho kanje.
Ikhansela le-DA, uMnuz Zwakele Mncwango, uthe ngamampunge ukuthi ngalokhu kuzosheshiswa izinhlelo zomphakathi, wathi uKhongolose ufuna ukuba ngondlovukayiphikiswa ngalokhu.
Uthe kabahambisani nokuqalwa kwalolu hlelo.